निषेधाज्ञा थप कडा बनाउने बेला आयो भनेका सिडियोहरुले बढाए निषेधाज्ञाको अबधि, कस्ता नियम फेरीए ? – Kavrepati
Home / समाचार / निषेधाज्ञा थप कडा बनाउने बेला आयो भनेका सिडियोहरुले बढाए निषेधाज्ञाको अबधि, कस्ता नियम फेरीए ?
admin July 25, 2021	समाचार Leaveacomment 53 Views
औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्रीका पसलहरू बाहेक अरू पसल तथा व्यवसायहरू साँझ ७ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइनेछन्। रेष्टुरेन्ट तथा फास्ट फुड, अनलाइन अर्डर र टेक अवेका सेवाहरू पनि साँझ ७ बजेसम्ममात्रै सञ्चालन गर्न पाइने आदेशमा उल्लेख छ।
Previous बिनोदले यसरी उचालेपछि अनिताले बिनोदको चस्मानै यसरी खोसिन (हेर्नुस् भिडियो)
Next खुसिको खबर ! चम्सुरिले मृगौला यसरी पाइन ,कस्ले दिने भयो (हेर्नुस् भिडियो )